Kiiska Macmiilka - Linqing Xinri Precision Bearing Co., ltd.
Maxay Macaamiishu Odhan
XRL Co., waxay leedahay koox tiknoolajiyadeed oo xoog leh oo leh injineer Japan ah si ay u xalliyaan dhibaatooyinka kala duwan ee codsiga iyo adeegsiga tilmaamahayaga.
Waxaan haynaa shaqaale xirfadlayaal ah oo hawlgala. Oo annagu waxaan awoodnaa sida ku cad sawirradaada ama shuruudahaaga wax-soo-saarka caadadu samaysay.
Marka laga reebo iibinta gudaha, xiritaanka XRL wuxuu durba u dhoofiyay in ka badan 120 dal.
K kaliya wuxuu sugayaa inuu la kaashado soo -saareyaasha soo saaray saamiyo tayo sare leh. Wuxuu u baahan yahay inuu adeegsado xiritaanka XRL si uu u beddelo saamaynta SKF ee suuqa dhammaadka
Aad baan ugu mahadnaqaynaa kalsoonidiisa, wax badan ma hadlayo oo wuxuu naga soo saaray amar tijaabo ah. Meel muhiim ah ayuu ku qaadanayaa tayada annaguna isku qiimayn ayaan ku yeelannay tan.
Amar maxkamadeed ka dib, wuxuu mar kale naga dalbaday dhowr amar, waxaanan la hadlaynaa amarka cusub ayaa soo socda goor dhow.
Waxaan ku talo jirnaa inaan u horumarinno inuu noqdo wakiilka sumaddayada XRL ee Pakistan.
Ruushku waa suuq weyn oo adeegsada. Laakiin sida siyaasadda ka-hortagga daadinta, Waxay ku ahayd dhibaato weyn macmiilka laga keeno Shiinaha. Sannado badan oo waayo -aragnimo iskaashi la leh saaxiibbada Ruushka iyo la -hawlgalayaasheeda, waxaan leenahay soo -wade maraakiib qaan -gaar ah oo gaadiid ka samayn kara Malaysia ama Thailand, waxay wax badan u badbaadin kartaa macaamilka. Waxaan u samayn karnaa Thailand iyo Malaysia CO macaamilka inuu sameeyo nadiifinta caadada ah.
Xidhiidhka Afrika inaga dhexeeya ayaa u wanaagsan sida ka dhexeeya qaraabada fog iyo deriska dhow. Bilowgii, J wuxuu ka bilaabay dhawr xabbadood oo muunado ah si loo tijaabiyo tayada iyo warcelinta suuqa. Markii dambe wuxuu kordhiyay tirada dalabka waqti ka dib, Xitaa waqtigii ugu adkaa ee coronavirus bishii Abriil 2020, wuxuu sidoo kale na siiyay hal amar, aad ayaan ugu mahdineynaa taageerada isaga. Sida xirxirida tayada sare iyo quruxda ee xirmooyinka XRL, si dhakhso ah ayaa loo iibiyay maalmo yar gudahood markii ay timid dekedda.
N waa wakiilkayaga Peru, wuxuuna ahaa wakiilkayagii ugu horreeyay ee waddamada Koonfurta Ameerika. Wuxuu ka bilaabmay amarkii yaraa ee ugu horreeyay wuxuuna keenay LCL, Laakiin hadda wuxuu dalban karaa 1*40FT weel bil kasta. Hadda, annagu ma nihin oo keliya shuraakada ganacsiga sidoo kale waa saaxiibo wanaagsan nolosha.
Inaad noqoto wakiilkayaga sumadda XRL, waxaan siineynaa hadiyad xayaysiis oo lacag la’aan ah, sida qalimaan iyo funaanado ay wataan XRL LOGO, sidoo kale waxaan bixinnaa ilaalinta suuqa iyo adeegga xirfadeed ee ugu wanaagsan, Waxaan gacanta ku horumarinnaa suuqa. Waxaana ku kalsoonahay inuu noqon doono wakiilka ugu weyn ee dalalka Koonfurta Ameerika mustaqbalka dhow.
Waxaan ku kulannaa bandhigga Shanghai ee 2016. Waxaan ka dhignaa OEM sumaddiisa T, Wuxuu lahaa amarro tiro badan sanad walba iyo sahaydu aad bay ugu iibiyaan suuqa Ukraine.
Y sidoo kale wuxuu ka yimid Ukrain, Wuxuu ku hawlanaa meheradda dayactirka baabuurta ee maxalliga ah, wuxuu u safri jiray Shiinaha marar badan sannad kasta wuxuuna iibsanayaa, wuxuu inta badan nagu amri jiray sumadda sumadda LADA, VPZ, VBF, SPZ Etc ..
M wuxuu naga helay websaydhka shirkadda, wuxuuna durba dhigay 5 amar unitil hadda. In kasta oo tirada amarada aanay badnayn, haddana waxay leedahay awood weyn oo horumar. Waxaa intaa dheer, WaayoFiyatnaamiis suuqa, waxaan u lahayn waayo -aragnimo badan suuqan, filo saamiyada tayada sare leh waxaan sidoo kale siin karnaa shahaadada COPE si ay uga caawiso inay ka dhigaan nadiifinta caadada leh waajibaadka soo dejinta hoose.